Wiil uu dhalay Fahad Yaasiin oo dowladda Kenya sharciga kala noqotay – Madal Furan
Hoy > Warka > Wiil uu dhalay Fahad Yaasiin oo dowladda Kenya sharciga kala noqotay
Wiil uu dhalay Fahad Yaasiin oo dowladda Kenya sharciga kala noqotay
Nairobi (Madal Furan) – War laga helayo ilo doblomaasiyaadeed ayaa sheegaya in Dowladda Kenya wiil uu dhalay Agaasime ku xigeenka Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin ay kala noqontay sharciga dalkaas ee baasaboorka iyo kaarka aqoonsigaba.
Dowladda Kenya ayaa in dhoweydba waxay dabagal ku haysay kiiska Fahad Yaasiin oo la sheegay inuu si sharci darro ah ku haysto Baasaboorka iyo Kaarka Aqoonsiga ee dalka Kenya, sidaas awgeedna uu sharcigii dalkaas ku waayey wiilka uu dhalay oo lagu magacaabo Camaar Fahad Yaasiin oo jira 23 sanadood jira.
Wargeyska Daily Nation eek a soo baxa magaaladda Nayroobi ee dalka Kenya ayaa 21kii Agoosto daabacay xogta Baasaboorada uu haysto Fahad Yaasiin oo ka qaatay dalka Kenya, kuwaasoo ah Laba Baasaboor oo taariikhda dhalashada kala duwani ay ku qoran yihiin, kuwaasoo la sheegay inuu ku qaatay si sharci darro ah.
kala duwan ay ku qoran yihiin Fahad ayaa lagu tuhmayaa inuu haysto laba baasaboor oo Kenyan ah oo qaab sharci-darro ah uu ku helay, islamarkaana ay ku qoran yihiin taariikho dhalasho oo is-khilaafsan, islamarkaana khilaafsan kuwiisa Soomaaliya.
Qormada Wargeyska ayaa lagu sheegay Lambarka Baasaboorkiisa oo ah CO24542 iyo Kaarka aqoonsiga oo Lambarkiisu yahay 22847167,iyadoo uu ku qoran yahay magaca Axmed Farax Daahir waxaana socda baaritaan lagu ogaanayo sida uu ku helay.
Waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in dowladda Kenya ay bilowday baaritaano ku wajahan qoyska Fahad Yaasiin xubno ka mid ah, kuwaasoo la soo sheegayo in qudhooda lagala noqday warqadihii aqoonsiga ee dalka Kenya.
Madaxweyne Deni “Mudadii aan joognay Dubai waxaan ka wada hadalnay sidii loo ilaalin lahaa xiriirka Labada dal.” + Sawiro
Sawiro:- RW Khayre oo tababar u soo xiray ciidamo kumaandoos ah ooay tababartay dawladda Turkiga
Magaaladda Dhuusamareeb oo ammnigeeda la adkeeyay